QEMU 6.0 waxay la timid kor uqaadis iyo taageero ARM, xulashooyin tijaabo ah iyo inbadan | Laga soo bilaabo Linux
QEMU 6.0 waxay la timid kor uqaadis iyo taageero ARM, ikhtiyaarro tijaabo ah iyo inbadan
Daahfurka nooca cusub ee mashruuca QEMU 6.0 kaas oo diyaarinta in ka badan 3300 isbedel ay sameeyeen 268 horumariyayaal oo isbadaladooda ay ka mid yihiin hagaajinta darawalka, taageerada barnaamijyada cusub iyo ikhtiyaarrada tijaabada ah.
Kuwa aan aqoon u lahayn QEMU, waa inaad ogaataa inay tahay software-ka kuu oggolaanaya inaad ku socodsiiso barnaamij isku-duuban oo loogu talagalay qalabka qalabka ee nidaamka nidaam leh qaab-dhismeed gebi ahaanba ka duwan, tusaale ahaan, inaad ku shaqeyso codsi ARM ah oo ku habboon x86 PC-ga.
Wararka ugu waaweyn ee QEMU 6.0
Qaabkan cusub ee Qemu 6.0 NVMe emulator darawalku wuxuu hadda u hoggaansamayaa qeexitaanka NVMe 1.4 waxaana ka mid ah taageerada tijaabada ah ee loogu talagalay meelaha magacyada aagagga, iskudhafka I / O, iyo sirta keydinta dhamaadka ilaa dhamaadka.
Emulator ARM wuxuu ku darayaa taageerada ARMv8.1-M 'Helium' naqshadaha iyo processor-ka Cortex-M55, iyo sidoo kale ARMv8.4 TTST, SEL2, iyo DIT tilmaamo dheereeya. Taageerada ARM mps3-an524 iyo mps3-an547 loox ayaa sidoo kale lagu daray. Kudayasho qalab dheeri ah ayaa loo hirgaliyay xlnx-zynqmp, xlnx-versal, sbsa-ref, npcm7xx, iyo sabrelite looxyada.
ARM ee deegaanka isticmaalaha iyo qaababka ku dayashada heerka nidaamka, ARMv8.5 MTE taageerada kordhinta ayaa la hirgaliyay (MemTag, Memory Tagging Extension), oo kuu oggolaaneysa inaad tags ku xirto hawlgal kasta oo khariidadeynta xusuusta ah isla markaana aad abaabusho jeeg tilmaame ah markaad xasuusta galeyso, taas oo ay tahay inay la xiriirto sumadda saxda ah. Kordhinta waxaa loo isticmaali karaa in lagu xannibo ka faa'iideysiga nuglaanta ay sababtay helitaanka meelihii xusuusta ee horay loo sii daayay, daadadka buuxsamay, wicitaannada horudhaca ah, iyo adeegsiga ka baxsan duruufaha hadda jira.
Emulatorka 68k wuxuu ku darayaa taageero nooc cusub oo ah mishiin "jilitaan" lagu daydo adoo adeegsanaya aaladaha virio si loo wanaajiyo waxqabadka, halka emulator-ka naqshadaha x86 uu ku daro awoodda isticmaalka tikniyoolajiyadda AMD SEV-ES (hufnaan sir ah oo la kaydin karo) si loo kaydiyo diiwaannada processor-ka ee loo isticmaalo nidaamka martida, taasoo ka dhigaysa waxyaabaha ku jira diiwaannada kuwo aan la geli karin deegaanka martida loo yahay haddii nidaamka martida uusan si cad u oggolaanayn marinkooda.
Sidoo kale Qemu 6.0 xulashooyinka tijaabada ah ayaa lagu daray "-Machine x-remote" iyo "-device x-pci-proxy-dev" si loogu daydo ku dayashada aaladda howlaha dibadda. Qaabkaan, kaliya jilitaanka jilitaanka SCSI lsi53c895 SCSI ayaa hadda la taageeray.
Sidoo kale qayb cusub oo FUSE ah oo loogu talagalay dhoofinta aaladaha xannibaadda, oo kuu oggolaanaysa inaad fuusho qayb ka mid ah gobolka qalab kasta oo xannib ah oo lagu isticmaalo martida. Dhoofinta waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo xayiraadda dhoofinta-dhoofinta-kudar amarka QMP ama adeegsiga ikhtiyaarka "–export" ee qemu-storage-daemon utility.
Dhinaca kale, waxaa lagu xusay in Virtualofs ay wax ka qabato nuglaanta:
CVE-2020-35517 - Waxay u oggolaaneysaa marin u helka deegaanka martida nidaamka nidaamka martida iyadoo la abuurayo feylal qalab gaar ah oo ku saabsan nidaamka martida oo ay adeegsadeyaasha mudnaanta leh ee ku jira buugga lala wadaago deegaanka martigeliyaha.
CVE-2021-20263 - Waxaa sababay cillad ku timid maaraynta astaamaha dheeraadka ah ee 'xattrmap', waxayna sababi kartaa ogolaansho qoraal ah iyo kordhinta mudnaanta martida dhexdeeda in la iska indhatiro.
Lagu daray kaalmo tijaabo ah si loo abuuro shaashado ka kooban waxyaabaha ku jira RAM.
Taageero lagu daray kudayashada processor-ka Qualcomm Hexagon oo leh DSP.
Aaladda koronto-dhaliyaha caadiga ah ee TCG (Tiny Code Generator) waxay la jaanqaadi kartaa jawiga martida macOS ee nidaamyada leh jabsiga cusub ee Apple M1 ARM.
Emulator-ka RISC-V ee looxyada Microchip PolarFire wuxuu taageeraa flash flash QSPI NOR.
Emulator-ka 'Tricore emulator' wuxuu hadda taageeraa nooc cusub oo ka mid ah looxyada TriBoard oo ku dayanaya Infineon TC27x SoC.
Emulator-ka 'ACPI' wuxuu bixiyaa awood uu ku magacaabo adapters-ka shabakadaha nidaamyada martida, iyadoon loo eegin amarka ku xirnaanta baska PCI-ka.
Virtiofs waxay ku darsataa taageerada FUSE_KILLPRIV_V2 xulashada si loo wanaajiyo waxqabadka martida.
VNC waxay ku darsataa taageerada daahfurnaanta calaamadaha iyo taageerada qiyaasta shaashadda shaashadda ee ku-meel-gaarka ah ee ku saleysan cabbirka daaqadda.
QMP (QAAMUUNKA QARANKA MAGAALADA) waxay ku darsataa taageerada marin-u-helka isku midka ah marka la qabanayo howlaha gurmadka.
Emulator-ka USB-gu wuxuu ku daray awood uu ku badbaadiyo taraafikada la soo saaray markii uu la shaqeynayay aaladaha USB-ka ee feyl gooni ah oo loogu talagalay baaritaanka dambe ee Wireshark.
Tilmaamaha cusub ee load-snaPhot, key-snapshot iyo amarrada tir-tirinta ayaa lagu daray si loo maareeyo qcow2 snapshots.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » QEMU 6.0 waxay la timid kor uqaadis iyo taageero ARM, ikhtiyaarro tijaabo ah iyo inbadan
Postfix 3.6.0 waxay la timid shuruudo loo dhan yahay, horumarin iyo waxyaabo kale oo badan
GitHub waxay hirgelisaa sharciyada daabacaadda natiijooyinka cilmi baarista amniga